Friday, 12 Jan, 2018 3:34 PM
बेनी, म्याग्दी, २८ पुस- बेनी नगरपालिका–४ सिंगाका युवाले गाउँमा पशुपालन गरेर दूध बिक्रीबाट वार्षिक रु एक करोड बराबरको कारोबार गरेका छन् ।उनीहरुले दूध बिक्री गरेर मासिक रु. ४० हजारदेखि रु एक लाखसम्म आम्दानी गर्दैआएका छन् । कतारबाट फर्किएर गाउँमा भैँसीपालन गर्दैआएका बेनी नगरपालिका–४ का मनबहादुर खत्रीले दूध बिक्रीबाट अहिले मासिक रु एक लाखभन्दा बढी कमाउन थाल्नुभएको छ ।
सहकारीका सञ्चालक कोपिलाल पौडेलका अनुसार अहिले बजारमा दूध प्रतिलिटर रु. ८५ मा बिक्री भइरहेको छ । किसानले प्रतिलिटर रु. ६५ मा सहकारीलाई दूध बेच्दै आएका छन् ।